Amanani eTrafikhi yaseTraport yamva nje ngoSeptemba 2021: Kulungile!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Amanani eTrafikhi yaseTraport yamva nje ngoSeptemba 2021: Kulungile!
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • iindaba • Ukukhutshwa kweendaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Isikhululo senqwelomoya iFrankfurt (FRA) samkele abakhweli abayi-3.1 yezigidi ngo-Septemba ngo-2021-emele ukunyuka nge-169.1 yeepesenti unyaka nonyaka, nangona kuthelekiswa nobuthathaka kakhulu ngoSeptemba 2020. Ukukhula kwabakhweli kuqhubekile kuqhutywa ikakhulu kukuhamba kweholide.
Ukukhula kwabakhweli kuyaqhubeka kuqhutywa ikakhulu kukugcwala kweeholide. Kwinyanga yokunika ingxelo, amanani abakhweli be-FRA- ngelixa besathumela ukwehla kweepesenti ezingama-54.0 xa kuthelekiswa noSeptemba 2019 - baphinde bafikelela phantse kwisiqingatha senqanaba laphambi kobhubhane, ngaloo ndlela kuqhubeka imeko elungileyo ebekwe ngo-Agasti 2021.
Ngexesha leenyanga ezilithoba zokuqala zika-2021, i-FRA isebenze inani elipheleleyo labakhweli abazizigidi ezili-15.8. Oku kubangele ukwehla kweepesenti ezingama-2.2 xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, xa kuthelekiswa nesilayidi seepesenti ezingama-70.8 xa kuthelekiswa neenyanga ezilithoba zokuqala zika-2019.
Ukuhamba ngenqwelomoya (ukuhamba ngenqwelomoya + ngenqwelomoya) kuqhubekeke nokukhula ngamandla ngoSeptemba 2021, kunyuka ngokuqaphelekayo nge-13.4 yepesenti unyaka nonyaka ukuya kwi-188,177 yeetoni.
Xa kuthelekiswa noSeptemba 2019, iitoni zemithwalo zifumene iipesenti ezingama-7.7 kwinyanga yokunika ingxelo. Ukuhamba kwenqwelomoya kunyuke ngeepesenti ezingama-66.1 unyaka nonyaka ukuya kuma-28,135 ukusuka nokuhla emhlabeni. Ubunzima bokuqokelela ubunzima obuphezulu (MTOW) bonyuke ngeepesenti ezingama-61.5 ukuya kuthi ga kwi-1.8 yezigidi zeetoni.
Ngo-Septemba ka-2021, izikhululo zeenqwelo moya kwizikhundla zamazwe aphesheya zeFraport zaqhubeka nokuxela ukugcwala kwezithuthi. Ngaphandle kwesikhululo senqwelomoya iXi'an (XIY) e China, izikhululo zeenqwelo moya zeQela laseFraport liphumelele ukukhula okubonakalayo. Kwezinye izikhululo zeenqwelo moya zamaqela, ukugcwala kwabantu kunyuke ngaphezulu kwekhulu leepesenti unyaka nonyaka- nangona kuthelekiswa nokuncitshiswa kakhulu kwenqanaba lezithuthi ngoSeptemba 100. Xa kuthelekiswa nendyikityha yangaphambi kukaSeptemba 2020, uninzi lwezikhululo zeenqwelomoya zeQela leFraport kwihlabathi liphela zisabhalisile amanani abakhweli aphantsi. Nangona kunjalo, ezinye izikhululo zeenqwelomoya zeqela elikhonza kwiindawo zabakhenkethi ezifuna amabango aphezulu-ezinje ngezikhululo zeenqwelomoya zaseGrisi okanye iAntalya kwisikhululo senqwelomoya saseTurkey - zibone ukugcwala kwezithuthi ukuya kuthi ga kumyinge wama-2019 eepesenti zamanqanaba angaphambi kwengxaki kwinyanga yokunika ingxelo (xa kuthelekiswa noSeptemba 80).
Isikhululo senqwelomoya iLjubljana (LJU) kwisixeko esilikomkhulu saseSlovenia samkela abakhweli abangama-65,133 ngoSeptemba 2021. Kwizikhululo zeenqwelo moya zaseBrazil iFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA), ukuhlanganiswa kwezithuthi kunyuke kwakhwela kubakhweli abangama-820,169. Isikhululo senqwelomoya sasePeru i-Lima Airport (LIM) sifumene abakhweli abaphantse babe sisigidi esi-1.1 kwinyanga yokunika ingxelo.
Itrafikhi iyonke kwizikhululo zeenqwelo moya ezingama-14 zaseGrisi zonyuke zaya malunga ne-3.4 yezigidi zabakhweli ngoSeptemba 2021. Kunxweme lwaseBulgaria kuLwandle oluMnyama, izikhululo zeenqwelo moya zeTwin Star zaseBurgas (BOJ) naseVarna (VAR) zikwachaze ukugcwala okuphezulu kwabantu abangama-328,990 . Isikhululo senqwelomoya iAntalya (AYT) eTurkey samkele abagibeli abayi-3.8 yezigidi. Isikhululo senqwelomoya saseSt. Isikhululo senqwelomoya iXi'an (XIY) e-China sarekhoda abakhweli nje abangaphantsi kwesigidi esi-1.9 kwinyanga yokunika ingxelo.
Khuphela idatha yeTrafikhi (PDF)